** Entsha ** Iintlanzi kunye neeChips
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguJérôme
Iintlanzi kunye neeChips yi-chalet ehlaziywe ngokupheleleyo emdeni wehlathi elikhulu. I-cachet yayo ye-fama yaseScandinavia ekhethekileyo iya kukunika umhombiso ofudumeleyo, entliziyweni yenye yezona ndawo zintle zaseQuebec.
I-chalet inokuhlalisa ngokukhululekileyo abahambi abathandathu kunye namagumbi ayo okulala amathathu kunye neendawo eziqhelekileyo ezixhotyiswe kakuhle.
Uya kuba nokufikelela kwiTrout Lake (akukho moto), malunga nokuhamba imizuzu emihlanu.
I-Orford yeyona ndawo ifanelekileyo kubathandi bangaphandle!
Iintlanzi kunye neetshiphusi yi-chalet entle ehlaziyiweyo ngokupheleleyo. Kumgangatho ophantsi, uya kufumana indawo evulekileyo ebandakanya ikhitshi langoku elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo yepropane kunye nomabonwakude, kunye negumbi lokutyela elinetafile engqukuva kunye nekona encinci yokufunda. Yindawo enkulu kwaye eqaqambileyo kakhulu apho unokucamngca ngehlathi kwaye ufikelele kwi-terrace enkulu yangasemva.
Kwakhona kumgangatho ophantsi, kukho igumbi lokulala elinebhedi yokumkanikazi, kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo.
Kwigumbi elingaphantsi, uya kuhla ungene kwigumbi lokuzonwabisa elikhulu elinetafile encinci yehoki, itafile yepoker kunye negumbi le-cinema. Iimidlalo ezininzi zebhodi kunye nekhonsoli yomdlalo ziyafumaneka.
Kwakhona kumgangatho ongaphantsi, kukho amagumbi amabini okulala ngaphezulu aneebhedi ezimbini. Igumbi eliluhlaza kunye negumbi elipinki. Kwakhona, kukho enye indlu yangasese enewasha - isomisi.
I-chalet ijikelezwe lihlathi elisondeleyo apho ungahamba khona, nokuba liliphi ixesha lonyaka.
Ukuhamba nje imizuzu embalwa, unokufikelela kwichibi le-trout. Ichibi elincinane elingenamoto lilungele ukukhwela inqanawa, ukukhwela inqanawa okanye ukuloba. Iikayak ezimbini zisesandleni sakho.
Iyindawo encinci yeechalet ezimbalwa kunye nezindlu ezingenabamelwane basemva, ejikelezwe lihlathi elikhulu leeconifers kunye nemithi evuthulukayo.
Malunga nokuhamba ngemizuzu emi-6, uya kuba nesiqinisekiso sokufikelela kwichibi le-trout. Iikayak ezimbini zinikezelwe kuwe. Yindawo entle, ezolileyo apho unokubheqa khona ibhodi.
Malunga nemizuzu esi-7 yokuqhuba yiMount Orford yokukhwela intaba kunye nokutyibiliza.
IMont Orford National Park yimizuzu nje embalwa ukusuka kwi-chalet apho kukho amachibi kunye neendlela ezininzi zokuhamba kunye nokuhamba ngebhayisekile.
Imizuzu eli-10 kude ngumasipala waseMagog kunye nedolophu entle kunye neLake Memphremagog.
Sifumaneka ngetekisi, ifowuni kunye ne-imeyile.